Saxaafadda Qaarkeed oo danayneysa qalalaase ka dhaca magaalada Muqdisho
Axmed Abuukar | abuukar40@hotmail.com
Waa marag ma doonto bannaanka taal oo aan qofka ka qarsoomi karayn in saxaafadda Soomaalida qaarkeed ay u danayneyso in dhibaato, bambaanooyin, isqarxin, qalalaase iyo bara kac uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Saxaafaddaas marka ay sidaas ku kacayeen ee ay qalinkooda iyo carrabkooda dhibaatada ku doon doonayaan macnaheedu ma aha in ay neceb yihiin dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee wax ayaa sababay waxaasna waa iska caddaan qof kasta garan karayo.
Waa tii Soomaalidu tiri "Carrab dalab leh iyo lug dalab leh waxaa la hor ogaadaa Carrab dalab leh", taas macnaheedu waa haddii aad hadasho ama qoraal aad samayo halka aad u badan tahay ee aad taageereyso iyo waxa aad diidan tahay horay ayaa laga ogaanayaa, ama dhex dhexaad iska dhig ama ha iska dhigin.
Saxaafaddaas qaar kamid ah waxay diidan yihiin sidee Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo reer Qansax ah madaxweyne uga noqonayaa oo uga talinayaa caasimaddii Soomaaliya iyo dalkii oo dhan? waxana hoggaamineysa caadifad qabyaaladeed.
Qaar kale ayaa u barooranaya Islaamiyiintii mayalka adkaa oo leh sidee odayaashii cagta loo mariyey oo dawlad calmaani ah ay dalkii uga talineysaa? Allaylehe aan dabka hurino oo yaan lagu ledin magaalada Muqdisho.
Ugu dambayntii muhiim ma aha inaan iraahdo idaacad hebel ama wargeys hebel ama website hebel ayaa sidaas u dhaqma, waxanse hubaa inaad akhristow aad hadda mid mid u sheegi karaysid qalabka warbaahineed ee aan ka hadlayo.
Laakiin, su'aal ayaa maskacdayka ku wareegeysa oo aan jawaab u waayey taas oo ah, hoobiye, qarax, is qarxin, barakac iyo dhiig shacab oo daata yaa ku naaxaya oo dani ugu jirtaa yaase ku burburaya?